सुस्तामा संर्घष्ा गरिरहेका र भारतीय पक्षको निसाना बनिरहेका व्यक्तिहरु सुस्ता अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई अुनरोध गरेका छन् । सिंहदरबारको पश्चिम ढोकादेखि जिल्ला प्रशासनसंग गुहार माग्दा पनि सुस्ता बचाउनेतर्फचासो नभएको उनीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो पटक स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेले सुस्तामा पुग्दा पनि उनीहरुले त्यही कुरा दहोर्‍याएका थिए । *तपाईंले भारतीय एसएसबीको आडमा अतिक्रमण भयो भन्नुभयो, के नेपालका सुरक्षाकर्मीले अतिक्रमण रोक्न कुनै पहल गरेका छैनन् ?
*निरीक्षण गरेपछि के परिणाम निस्क्यो त ? विभिन्न क्षेत्रबाट निरीक्षण गरेर अहिले सुस्ताको बारेमा संचारमाध्यमदेखि जनस्तरबाट भारतीय अतिक्रमणको बारेमा आवाज उठाइएपछि नेपाल सरकारले पनि केही सुनेजस्तो गरेको छ । यसैका कारण र्सार्क सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत पुग्नुभएकी परराष्ट्र मन्त्री साहना प्रधानले मंसिरको २१ गते भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीसंग भेटघाट गरी सुस्ताको बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो । उहाँले सीमा विवादका बारेमा कुरा उठाउनुभएको थियो । जनदबाबको यो एउटा पाटो हो । अहिलेसम्म सुस्ताको बारेमा मन्त्रिस्तरमा कुरा भएको थिएन ।
*यी दर्ुइ स्थानको नक्शांकनमा कुरा नमिलेको हो ? मेरो बुझाइमा यी दर्ुइ स्थानको नक्शा आदान प्रदान र ऐतिहासिक आधार लिएर जुन अंकन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा सहमति नभएको हुनसक्छ । किनकि, कुनै नक्शा वा ऐतिहासिक दस्तावेज दुवै देशलाई मान्य भयो भने मात्र त्यसको आधारमा सीमांकन गरिन्छ । तर, कालापानी र सुस्ताको विषयमा नेपालले एउटा नक्शा पेश गर्ने र भारतले त्यसलाई मान्यता नदिने भैरहेको छ । भारतले पनि अर्को प्रकारको नक्शा देखाउँदा नेपाललाई मान्य नहुने अवस्थाले नै यी दर्ुइ स्थानको विवाद नटुंगिएको हो । यो समस्या समाधानका लागि वार्ता डेढलक भएको छ ।
This entry was posted on May 20, 2010 at 5:04 pm	and is filed under अन्तरबार्ता.